Thola izici zenja yeShih Tzu | Izinja Umhlaba
USusy fontenla | | Izinja zizala
Este inja yemvelaphi yamaChina Kuyisibonelo esincane esinqoba wonke umuntu ngokubukeka kwakhe okuhle nomlingiswa omuhle. IShih Tzu iqanjwe ngamagama esiShayina athi 'lion dog', njengoba yafuywa yafana nebhubesi, yize ubukhulu bayo buqhelelene kakhulu nengonyama.
Njengamanje i- inja eye yathandwa kakhulu ezindaweni ezinjengeNgilandi. Ubukhulu bayo buyenza ilungele noma yiluphi uhlobo lwekhaya futhi ukuziphatha kwayo kuqinisekisa uthando lomndeni wonke. Lezi zinja zabelana ngezici eziningi ne-Pekingese ne-Lhasa Apso futhi zithandwa kakhulu.
1 Umlando kaShih Tzu
3 Uhlamvu lwenja
4 Shih Tzu ukunakekelwa
5 Impilo yenja
6 Kungani ugcine iShih Tzu ekhaya
Umlando kaShih Tzu
Imvelaphi yangempela yalolu hlobo, eyaziwa nangokuthi 'inja yengonyama' noma 'inja ye-chrysanthemum'. Ngokusobala besekuvele kunezinja ezifanayo ngonyaka we-VII BC kusuka kwimidwebo etholakele. Kwethulwa eChina ngesikhathi sobukhosi bakwaTang. E-Tibet wakhuliswa njengonkulunkulu ongumBuddha, ngenxa yokubukeka kwakhe. Lezi zinja zikhuliswe eMzini Ongavunyelwe. Ngesikhathi sobukhomanisi, lokhu kanye nezinye izinhlobo zezinja ezifuywayo kwakusengcupheni yokuqothulwa, ngoba zazibhekwa njengokunethezeka kwamazinga aphezulu. Phakathi nekhulu lama-XNUMX, lezi zinja zaduma ezwenikazi laseYurophu, ezaqinisekisa ukuqhubeka kohlobo nokusabalala kwalo kwamanye amazwe. Namuhla kungenye inhlobo ethandwayo yenja emhlabeni wonke, efanelekile emakhaya amancane ngenxa yobukhulu bayo.
El Inja yeShih Tzu incane, ngobude obungamasentimitha angama-26. Yinde kancane kunokuthi ubude futhi inikeza ukubukeka okuhlekisayo. Ikhanda lalo lincane maqondana nomzimba walo futhi linamehlo amakhulu nesifonyo esifushane. Izindlebe zayo zincane kodwa zinoboya obukhulu, obunika ukubukeka kwebhubesi elincane. Ibhantshi lalo lide, kokubili ebusweni nasemzimbeni, ngakho-ke kufanele linakekelwe njalo. Inomsila omude ogobile ngemuva. Umbala wakhe wezinwele unemibala eminingi yegolide, emhlophe futhi nsundu.
IShih Tzu iyinja ekahle yazo zonke izinhlobo zemindeni, ekwazi ukuzivumelanisa nazo zonke izinhlobo zezindawo. Nobabili ningajabulela indlu enengadi nefulethi elincane. Inja unesimilo esihle kakhulu ngemvelo yayo uqobo, okwenza kube lula ukuxhumana nayo. Kuyinja eboleka ukudlala futhi evame ukuba nomoya omuhle kakhulu uma kukhulunywa ngokuba nomndeni wakhe. Uzoba yinja ezosenza sikujabulele ukuba nenkampani yakhe nsuku zonke. Lapho bengumdlwane lesi sici singabenza bangalawuleki.
Kuyinto a inja ehlakaniphile nephapheme ngeke kuthathe isikhathi eside ukufunda ama-oda. Luhlobo olungaba nenkani kancane, ngakho-ke kufanele sibekezele futhi ngaphezu kwakho konke sizijwayeze nsuku zonke nabo ukuze bathuthukise isimilo sabo. Ukufundiswa kwenja kulula, ngoba ifunda ngokushesha futhi iyinja enesimilo esihle. Uma sikwazi ukuma siqine phambi kwenkani yakhe ngezikhathi ezithile, sizoba nenja elalela kakhulu.
Este inja ihlala iqaphile. Yize iyinja encane, kuyisilwane esingumnakekeli omuhle. Izokwazisa umndeni ngobukhona babantu ongabazi futhi kuzoba yinja enesibindi ezimisele ngokuvikela eyayo. Lokhu akusho ukuthi yinja enolaka, kepha inamandla futhi iqotho.
El inja kumele ihlangane nezinye izinja nabantu. Uyinja enhle futhi enobungani, kepha kusamele afunde ukuxoxa. Kuzoba lula ukuthi inja ifunde ukuzihlanganisa nokuba nezingane nezinye izilwane.
Shih Tzu ukunakekelwa
Le nja izodinga ukunakekelwa okuqondile ikakhulukazi ejazini. Izinwele zakhe bezilokhu zikhula kusukela esengumdlwane. Ingubo ende impela ezodinga ukunakekelwa okuningi. Kufanele uthenge ikama elikhethekile lezinwele ezinde ezingonakalisi noma eziphule ijazi lalo. Kufanele ikanywe futhi iphindwe nsuku zonke ukugwema amafindo nama-dreadlocks. Ngokusobala, uma ijazi lide kuzodingeka senze umsebenzi owengeziwe. Okunye ongakwenza ukugunda izinwele endaweni yokugunda izinwele ukuze ukwazi ukuyitayela kalula isizini. Lapho inja ifaka izinwele ezinde, yigcine ikude nobuso bayo, ngoba ingaphazamisa amehlo ayo.
Sus Amehlo amakhulu angadala ezinye izinkinga, ngakho-ke kufanele ugweme ukuthi izinwele zikukhathaze. Kumele sibahlanze uma sibona ukuthi banokungcola futhi sibabheke ukuthi bangangenwa yini. Isifonyo sabo esifushane naso siyinkinga kubo, ngoba bangaba nezinkinga lapho bephefumula futhi kwesinye isikhathi baze bahoxe.
Inja yeShih Tzu iyisilwane onempilo enhle, ngoba isikhathi sabo sokuphila cishe seminyaka eyi-13. Kunezifo eziningi ezingenzeka enjeni, njenge-entropion, i-retrophy retrophy eqhubekayo noma i-hip dysplasia. Izindlebe zakhe eziqhakazile nezinwele eziningi nakho kungaba yinkinga emholela ekutheni ahlupheke nge-otitis.
Su ukudla kufanele kube kuhle ukunakekela ijazi lakhe futhi kufanele azivocavoce nsuku zonke ukuze abe yinja elinganiselayo nenempilo ngokuphelele. Bajwayele ukuba nesisu esibucayi, kepha ngokufunzwa kwekhwalithi ngeke babe nezinkinga uma kukhulunywa ngokudla.
Kungani ugcine iShih Tzu ekhaya
Izinja zikaShih Tzu ziyathandeka ngokushesha nje lapho uhlangana nazo. Ukuvela kwazo kwezilwane ezincane ezifakiwe kwenza wonke umuntu azithande kusukela ngomzuzu wokuqala, umbono oqiniswa isimilo sawo esihle nobuntu obudlalayo. Kuyinja ekahle yendlu enezingane, ngoba wonke umuntu uzokujabulela imidlalo yakhe. Kuyinja elula ukuyiqeqesha futhi ikhombisa ubuhlakani obukhulu. Ubukhulu bayo buyenza inja ephelele yamafulethi amancane nazo zonke izinhlobo zamakhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Shih Tzu
Inkunzi yesiNgisi terrier